Ganacsade Soomaali ah oo looga Hiilinayo Shirkad Itoobiyaan ah [Warbixin].
Wednesday January 01, 2020 - 11:22:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sida la ogyahay ganacsigu waa waxa ay soomaalidu ku badbaaday intii lagu gudo jirey xilligii burburka haddaba bilihii u horreeyay ee sanadkii 2019 wuxuu khilaaf weyni ka dhex qarxay ganacsade Axmed Cismaan Geelle (Geelle Arab) iyo qoyska madaxtooyada
Sida la ogyahay ganacsigu waa waxa ay soomaalidu ku badbaaday intii lagu gudo jirey xilligii burburka haddaba bilihii u horreeyay ee sanadkii 2019 wuxuu khilaaf weyni ka dhex qarxay ganacsade Axmed Cismaan Geelle (Geelle Arab) iyo qoyska madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo jabuutina ay maamulka Somaliland u wakiilatay maxkamadeynta ganacsadeha.
Axmed oo ah ganacsade soomaaliyeed oo horay uga shaqayn jiray wadanka Jabuuti ayaa ismaandhaafkoodu wuxuu ku salaysanyahay kadib markii dayn ganacsaduhu ka qaatay BCIMR oo ah bangi dawladda Jabuuti badh leedahay sida ku cad heshiiska iskaashatada bangigaas.
Axmed oo ka daynsaday lacag dhan 20 milyan oo dollar. Labaatanka milyan waxa uu Axmed ugu bedelay hanti maguurto ah oo lagu qiyaasay 25milyan(damiinul maal).
Halkaa markii ay maraysay ayaa qoyska Madaxtooyada jabuuti ku qasbay ganacsadaha inuu shirkadda saami uga furo taas oo uu diiday Axmed sida uu sheegay afhayeenka ganacsade Axmed cismaan Geelle.
Intaa kadib shirkaddihiisii Jabuuti ku yaallsy oo dhan iyo hantidiisiiba waxas la wareegtay dawlada jabuuti. Reerka uu kasoo jeedo Axmed Cismaan iyo Suldaankooda guud ayaa sheegay in Axmed hantidiisa jabbuuti kaga maqani ay tahay 128milyan oo doolar.
Khilaafku kadib markii uu cirka isku sii shareeray ayuu maamulka Somaliland bilaabay in ay Axmed u gacan geliyaan qoyska madaxtooyada Jabbuuti ama ay maxkamad u saaraan.
Waxaa kaloo iyana jirta in bangigii uu lacagta ka amaahday Axmed uu siiyay hantidii ma guurtada ahayd ee 20 milyan ku qiyaasnayd waa sida uu afhayeenkiisu sheegay'e, Ganacsadaha ayaa illaa 2012 aas aasay shirkadda SBI lagu magacaabooo dalka gudihiisa kufarsamaysa sharaabka Coca Cola.
Shirkadda wuxuu ku aas aasay lacagtii 20 milyan ahayd ee uu ka deynsaday bangigii BCIMR-Djibouti ee aynu hore usoo sheegna halkaas oo ay shirkaddu sidoo kale hirgalisay in ay soo saarto sharaabo badan sida Faantooyinka noocyadooda kala duwan iyo caano moorsan.
Haddaba maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Hargeysa soo buux dhaafiyay sharaab Coca Cola ah oo ay ku xardhan tahay xuruuf farta xabashiga ah taas oo dadka qaarkood ay sheegayaan in sharaabkaas uu ku jiro nooc sakhrad ahi amaba khamri. Ganacsatada soomaaliyeed oo awalba ay ku yar tahay in ay sameeyaan shirkado waxsoosaara ayay tani ku noqon doontaa dhabar jab iyo in aan cidina isku dayin hal abuur wax soo saar.